Gabadhan dhowr iyo toban jirka ah inta jeer ee la guursaday tiro ma laha - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
October 16, 2020 at 18:16 Gabadhan dhowr iyo toban jirka ah inta jeer ee la guursaday tiro ma laha2020-10-16T18:16:19+02:00 WARARKA SOOMAALIYA
Munaasabadda meherka lafteeda way iska gaabneyd – wadaadkii ayaa dhowr eray akhriyay, iyada ayuu weydiiyay inay aqbashay meherka oo qiimihiisu ahaa $250 [£200], kaddibna wuxuu siiyay warqaddii qandaraaska meherka. Rusul ma aysan akhrin karin waxa ku qoran warqaddaas, xitaa haddii ay eegi lahayd ma aysan fahmi lahayn inay wax khaldan ku jiraan iyo inkale.
Daqiiqado yar kaddib markii uu wadaadkii u duceeyay, seygeeda cusub ayaa u kaxeystay guri meeshaas u dhawaa oo loo sheegay inuu yahay halka ay dageyso.
Walow Rusul ay xoogaa cabsaneysay, haddana waxay ku faraxsaneyd inay aragto guriga hoyga u noqonaya iyada iyo walaasheed.
Qolkii jiifka ayey la gashay seygeeda, markii ay albaabka soo xireysay waxay afka ku heysay duco ay Alle uga baryeysay in ninkan uu si fiican ula dhaqmo, noloshoodana ay muddo dheer socoto.
Run ahaantiina, dhowrkii maalmood ee ugu horreeyay si fiican ayey wax u socdeen.
“Waxaan dareemay inuu culeys weyn iga dhacay. In ugu dambeyntii aan wax kasta aniga la iga sugeynin,” ayey tidhi.
Laakiin dhowr isbuuc kaliya markii arooskeeda laga soo wareegay, seygeedii waa la waayay meel uu jaan iyo cidhib dhigay.
Waxba kama aysan ogeyn Rusul in guurkooda uuba ku ekaa waqti cayiman, oo la asteeyay intii uusan billaabaninba ka hor. Wuxuu ahaa nooc gaar ah oo ka mid ah guurka islaamka ee la isku khilaafsan yahay – oo la yidhaahdo “Zawaaj al-mutca” ama “Guurka raaxada”. Waa guur ay wadaaddada qaarkood ku banneeyaan in si xalaal ah la isugu galmoodo.
Guurkeediina sidaas ayuu waqtigiisa ku dhammaaday.
Waxay go’aansatay inay ku laabato wadaadkii mehriyay. Waxay sheegtay inuu u muuqday qof sugayay iyada.
Guurka mutcada waxaa lagu sheegay mid la sameyn jiray Islaamka ka hor, oo ay ku dhaqmi jireen dadkii carabta ahaa iyo kuwii Iiraan dagganaa labadaba.
Guurkan waxaa lagu qeexaa qandaraas lagu muujiyo waqtiga uu ku egyahay, kaasoo la siiyo xaaska ku meel gaadhka ah. Xitaa meelaha qaarkood hadda qandaraas lama qoro, wadaaddada unbaa afka ka sheega marka ay isku mehrinayaan lammaanaha.
Waqtiga uu ku ekaan karo waa inta u dhaxeysa hal saac ilaa 99 sano. Ninka khasab kuma aha inuu maalin kasta xaaskiisa la joogo, markii uu doonana wuu baabi’in karaa heshiiskaas.
Guurka mutcada xaaraan ayuu ka yahay dhanka muslimiinta sunniyiinta ah. Laakiin qaar ka mid ah wadaaddada sunniyiinta ayaa fasaxa noocyo kale oo kaas aan wax weyn ka duwaneyn. Ururrada u dooda xuquuqda haweenka ayaa cambaareeyay dhammaan noocyadan guurka ah.
Laakiin dadka taageera guurka mutcada waxay sheegaan inuu yahay tallaabo u fiican lammaanaha ku heshiinaya, mar haddii aysan ku jirin khiyaano.
“Arrintan waa mid aad loo sameeyo. Waxaa jira gabdho badan oo anigoo kale ah,” ayey tidhi Rusul.
Rulul iyo gabdhaha kale ee la midka ah, waxaa loo geystaa tacaddi. Ma aha dad uu aqoonsan yahay sharciga Ciraaq.
Wuxuu ka qaatay sawirro.
Rusul waxay ogeyd inay dhibaato badan nolosha kala kulmeyso haddii ay mushaarka yar sii qaadato, maadaama aysan waxba baraninna aysan heli karin shaqooyin heer sare ah.
Waxaa kale oo ay ogeyd inay weysay bikranimadeedii, sidaas awgeedna ay ku adkaaneyso sidii ay ku heli lahayd guur waara.
“Wadaadka wuxuu noqday nin i siiya shaqo, anigana ma heysanin wax aan ka ahayn inaan waddadaas ku socdo,” ayey tidhi.
Waxay BBC-da u sheegtay inay soo martay guur saacado ah iyo mid isbuucyo qaatay intaba.
“Markii uu wadaadka isoo waco, oo uu igu dhaho, ‘Waxaan kuu helay qof kugu habboon,’ kuma dhihi karo maya.”
Rusul waxay ilaa hadda la seexatay tobannaan nin – xitaa ma garaneyso tirada saxda ah – ee lagu aqal geystay guurka mutcada.
Waxay sheegtay in wadaadka uu si joogto ah u siiyo irbad ka ilaalisa inay uur qaaddo.
« Taariikhda Qadiimka ah ee Dadka iyo Dalka Soomaaliyeed – Qaybtii koobaad
iPhone 12: Waxa yar ee telefoonnadii casriga ahaa kasii dhigay casri »